I-Crunchbase Enterprise ye-Salesforce: Ukuchonga, ukungenisa, kunye nokuvumelanisa i-B2B Prospect Data | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 28, 2020 NgoLwesihlanu, Agasti 28, 2020 Douglas Karr
Iinkampani kwihlabathi liphela Crunchbase idatha yokuphucula ulwazi lwabo lweshishini, ukuqinisekisa ucoceko lwedatha elungileyo, kunye nokubonelela amaqela abo okuthengisa ukufikelela kulwazi lwenkampani abafuna ukubona amathuba.
ICrunchbase isungule entsha Umdibaniso weSalesforce kubo bonke abasebenzisi beCrunchbase oko kuyakwenza ukuba abantu kunye namaqela amancinci athengisayo akhawuleze afumanise kwaye asebenze kumgangatho ophezulu.
Olu hlaziyo luza ngexesha elibaluleke kakhulu kubathengisi- nge I-80% yeenkampani Ukuphonononga ngokukuko iindlela zokutshintsha iindlela zabo zokuya kwintengiso baye kwidijithali, kunye ne I-32% yabathathi-zigqibo besithi kusenokwenzeka ukuba utshintsho olunxulumene nobhubhane kwiindlela zentengiso zilapha ukuze zihlale.
Ngolu manyano, abasebenzisi beCrunchbase abasayi kuphinda bachithe ixesha elixabisekileyo lokuthumela ngaphandle izinto ezivela kwiCrunchbase ukuya kwiCRM yabo. Umdibaniso weSalesforce weCrunchbase Enterprise ikuvumela ukuba utyebise zonke iirekhodi ezitsha kunye nezikhoyo zeakhawunti ye-Salesforce kunye nedatha yezezimali yeCrunchbase kunye nedatha yezemali ebanzi (leyo yimimandla yedatha engama-40 +).
Crunchbase kwiZinto zokuThengisa
Yiya kuphando ukuya kufikelela kunqakrazo olumbalwa: Iifilitha zokukhangela zeCrunchbase, zidityaniswe ne amava enkampani entsha vumela abasebenzisi ukuba bafunde malunga nenkampani ethile, bafumane amathemba, kwaye bagcine ngqo kwi-Salesforce.
Gxila ekuthengiseni, hayi ekufakweni kwedatha: Jonga ukuba ngawaphi amathemba asele ekwiSalesforce kwaye kuthintelwe ukuphinda irekhodi. Xa abasebenzisi befumana kwaye begcina ithemba elitsha kwiCrunchbase ukuya kwi-Salesforce, ulwazi olusisiseko lwenkampani olufunekayo ukwenza ukuba ukufikelela eluntwini kugcinwe nalo.
Unamathuba abalondolozayo: Ngokhuphiswano olunamandla phakathi kwabathengisi, umceli mngeni wokuqala uhlala ubanga ithemba. Naliphi na ithemba umsebenzisi aligcinayo ukusuka kwiCrunchbase ukuya kwi-Salesforce iya kuba phantsi kwegama labo.
Abathengisi bayasokola ukufumana abathengi abaza kuba namandla okuthenga ngeli xesha lokudodobala kwezoqoqosho. Bachitha ixesha elixabisekileyo lokukhangela kunye nokufumana izikhokelo ezitsha, kudala ngaphambi kokuba bathumele i-imeyile yokufikelela. Umdibaniso wethu omtsha weSalesforce uyikhawulezisa le nkqubo yokudibanisa ngokudibanisa izixhobo zokukhangela zeCrunchbase kunye nesiseko sedatha yenkampani kunye nokuhamba komsebenzi okukhoyo kwamaqela. Ngoku, abathengisi banokuvumelanisa ngokukhawuleza iiakhawunti ezintsha abazifumeneyo kwiCrunchbase ngqo kwiCRM yabo. Kwaye, ngokulula ubone ukuba zeziphi iiakhawunti zeCrunchbase ezingekhoyo kwimeko yabo yokuThengisa, ukuze bafumane iiakhawunti ekungekho mntu kwiqela labo ongekabangi.
UArman Javaharian, iNtloko yeMveliso yeCrunchbase
Crunchbase nayo kutshanje iphehlelele gqibezela ukuyila ngokutsha iiprofayili zenkampani ngokujonga isithuba ekuvezeni amanqaku aphambili edatha anceda abathengisi ngokukhawuleza:
Qonda into eyenziwa yinkampani kunye nenqanaba lokukhula kwazo.
Hlaziya ukusebenza kwenkampani ngolwazi lwezezimali kubandakanya inkxaso-mali iyonke kunye nokufunyanwa.
Gumba kwiinkcukacha zokuthatha isigqibo sokuba inkampani iyazifanela na iimfuno zabo ngolwazi olunzulu malunga netekhnoloji yenkampani, uluhlu lwengeniso eqikelelweyo, abantu, kunye neempawu zokukhula.
Funda ngakumbi malunga neCrunchbase yeShishini
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: UDouglas ngumseki-kunye we Highbridge, i Iqabane lomthengisi